Amathiphu nezibonelo kuma-tattoos engalweni yonke | Amadoda aSitayela
Sivame ukuzibuza kungaba yini indawo yomzimba wethu ekhethwe ukuthola i-tattoo. Umhlane, intamo nesisu kuyizindawo ezinkulu zesikhumba sethu, kepha ama-tattoo engalweni avame ukufunwa kakhulu futhi asetshenziswe kabanzi.
Into yokuqala uma sinquma ngamathambo engalweni, ukuthi khetha umklamo owuthanda kakhulu. Kunemibono yazo zonke izinhlobo zemibala ehlukene, izitayela nosayizi. Phrinta isithombe bese usiyisa kumculi we-tattoo, Ngokuvamile kuyindlela esetshenziswa yilabo abakhetha i-tattoo eyenziwe yaba ngeyakho ngokuphelele, esithombeni esikhethwe kwi-Intanethi noma kwenye indawo.
1 Kungani ama-tattoo engalweni?
2 Ingalo imibono ye-tattoo
3 Isibonelo sosaziwayo
Kungani ama-tattoo engalweni?
Kuwo wonke umlando, Emasikweni amaningi, ingalo ibiyindawo ekhethwayo yokubhala ama-tattoo. Esinye sezizathu eziyinhloko ukuthi ama-tattoos engalo kulula ukukhombisa, noma ukumboza lapho bengafuni ukukhombisa.
Esinye isizathu sokukhetha ama-tattoo engalweni ukuthi leyo ndawo yomzimba wethu iyavuma izinhlobo eziningi uma kukhulunywa ngokudweba noma ukuklama.
¿Ibiza malini i-tattoo yalolu hlobo? Silindele ukuthi kuzobiza ngoba ingaphezulu elizofakwa inki likhulu impela futhi uma ulifuna ngemibala noma ngemithamo emikhulu yeqiniso, kuzofanele ukhokhe enye imali ethe xaxa ngolwazi lomculi we-tattoo kanye nezingulube .
Ingalo imibono ye-tattoo
Abanye abantu benziwe ama-tattoos amakhulu ezingalweni zakhe, ethatha ehlombe (noma ngisho nehlombe lifakiwe), kuze kufike esihlakaleni noma kufaka isandla. Kukhona nenketho yemidwebo emincane eminingana.
Phakathi kwemiklamo noma izithombe ezisetshenziswa kakhulu, kukhona izinyoka, amadragoni, onkulunkulu, izakhi zeCeltic, izimbali, izinhlamvu zesiShayina ezinemiyalezo, njll.. Imvamisa, uchwepheshe esiya kuye ukuthola i-tattoo, unezinhlu noma izithombe ezinemibono eminingi, esingakhetha kuzo.
Kuyaziwa icala likaDavid Beckham, ekhombisa ama-tattoo ahlukahlukene ezingalweni zayo, ngomklamo wangemuva wefu njengentambo ejwayelekile yomdwebo wonke. Kubalulekile, uma kunemidwebo ehlukene, futhi uhlanganise into ethile enikeza ukuhlangana komdwebo wonke.
Imithombo yesithombe: Modaellos.com / Mahhala cindezela
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Amathrendi » AmaTattoos engalweni yonke
Abaqambi bayakuvumela ukuphuma kwama-flip-flops emgwaqweni